BUDDHIST TERMS' Dictionary: NON-MATERIAL SPHERE JHᾹNA - အရူပဈာန
NON-MATERIAL SPHERE JHᾹNA - အရူပဈာန
NON-MATERIAL SPHERE JHᾹNA Arupajhᾱna
အရူပဈာန - အရူပဈာန်။
အရူပဈာန် ၄-မျိုး -
(၁) အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန - အဆုံးမရှိသော ကောင်းကင် ပညတ်ဟူသော တည်ရာအာရုံရှိသော ဈာန်၊
(၂) ၀ိညာဏဉ္စာယတနဈာန - အဆုံးမရှိသော ၀ိညာဏ်ဟူသော တည်ရာအာရုံရှိသောဈာန်၊ အရူပဒုတိယဈာန် ဟု ခေါ်သော ၀ိညာဏဉ္စာယတနဈာန်ကို ဈာနလာဘီပုဂ္ဂိုလ်များ ၀င်စားလေ့ရှိကြသည်။
(၃) အာကိဉ္စညာယတနဈာန - တစ်စုံတရာ ဘာမျှမရှိခြင်းဟူသော နတ္ထိဘောပညတ်လျှင် တည်ရာအာရုံရှိသော ဈာန်၊ နတ္ထိဘောပညတ်ကို အာရုံပြုလျက် အရူပဈာန်သို့တက်ပြီးသော ဈာနလာဘီယောဂီရသေ့သည် နောက်ဘ၀၌ အရူပဗြဟ္မာဘုံသို့ လားရတတ်သည်။
(၄) နေ၀သညာနာသညာယတနဈာန - ရုန့်ရင်းသော အမှတ်သညာကားမရှိ၊ သိမ်မွေ့သော အမှတ်သညာ မရှိသည်မဟုတ်သော ဈာန်၊ နေ၀သညာနာသညာယတနဈာန်ကို အရူပစတုတ္ထဈာန်ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။
The four kinds of Non-material Sphere Jhᾱna are:
(1) The Jhᾱna with unbounded space as the object of meditation: Akᾱsᾱnancᾱyatana Jhᾱna;
(2) The Jhᾱna with boundless consciousness as the object of meditation: Viññᾱnancᾱyatana jhᾱna. Yogis who have achieved Jhᾱna usually enter upon and dwell in the base (ᾱyatana) consisting of boundless consciousness, which is termed as the Second Jhᾱna of the Non-material Sphere.
(3) The Jhᾱna with Nothingness as the object of meditation: Akincaññᾱyatana jhᾱna. The yogi who has achieved the jhᾱna based on Nothingness passes away to the realm of Brahmas who are devoid of corporeality, arῡpabrahmᾱ.
(4) The Jhᾱna where gross consciousness is absent, yet there is subtle perception so that it is termed as the Jhᾱna of neither-consciousness-nor-non-consciousness: Nevasaññᾱ nᾱsaññᾱyatana jhᾱna. The Nevasaññᾱ nᾱsaññᾱyatana jhᾱna is also called the Fourth Jhᾱna of the Non-material Sphere.